देउवा र प्रचण्डबीच सुटुक्क भेटवार्ता, यस्तो भयो सहमति - News20 Media
देउवा र प्रचण्डबीच सुटुक्क भेटवार्ता, यस्तो भयो सहमति
May 7, 2021 N20LeaveaComment on देउवा र प्रचण्डबीच सुटुक्क भेटवार्ता, यस्तो भयो सहमति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भेटवार्ता भएको छ ।
उहाँहरूबीच सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज साँझ भएको भेटवार्तामा आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव, प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो ।
गएको बुधवार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेताहरूसहित देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुग्नुभएको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट २७ गते बिदा हुँदै, प्रचण्ड–देउवाले यसरी मिलाए अपुग ८ भोट
नेपाली राजनीति यतिबेला निकै गर्माएको छ । सबैको ध्यान वैशाख २७ गतेमा तानिएको छ । नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा संयुक्त सरकार बन्ने अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेताहरुबीच सत्ता समीकरणका विषयमा गृहकार्य भने तीव्र बनेको छ।
ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन अन्य दलका नेताहरुलाई भेटेर फकाउन थालिसकेका छन्। रोचक त के भने ओलीले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई उनकै निवासमा दलबलसहित भेटेर विश्वासको मत दिन आग्रह गरे।
उता, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु संयुक्त सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका छन्। यद्यपि, यसले पनि अन्तिम रुप पाइसकेको छैन।
बुधबार देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरु बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए। ओलीले आफूइतर बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता नलिन र आफूलाई विश्वासको मत दिन देउवालाई आग्रह गरेपनि परिणाम उनले सोचेजस्तो भएन।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालालगायतका शीर्ष नेतासहित ओलीसँगको भेटमा बसेका देउवाले जवाफ दिए९ तपाईंलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६३ जना सांसद ९२ निलम्बित० छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन्। कांग्रेस सांसदहरुले आफूलाई मत नदिने निश्चित भएपनि ओली ुकेही खेल्न सकिनेु आशासहित बूढानीलकण्ठ छिरेका थिए।
देउवा९प्रचण्डलाई ८ मतको चिन्ता
ओलीविरुद्ध बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिन देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन्। देउवाले सरकार बन्न अंकगणित नपुग्ने भन्दै ुआँटु गरेका छैनन्। कांग्रेसमा ६३ जना सांसदमध्ये २ जना निलम्बित अवस्थामा छन्। मत दिन मिल्ने जम्मा ६१ जना सांसद मात्रै छन्।
छक्कबहादुर लामासहित माओवादीका ५४ जना सांसद हुन्। माओवादीका ४ सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीसँग सभामुखसहित ५० सांसद छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले मत दिन नपाउने भएपछि ऊसँग ४९ जना मात्रै सांसद हुन्छन्।
कांग्रेस, माओवादी, जसपाको बाबुराम भट्टराई९उपेन्द्र यादव पक्ष जोड्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि ८ सांसद अपुग हुन्छ। त्यसमध्ये एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहयोग गर्ने संकेत देखाएको छ। अरु ७ सांसद उपेन्द्रले आफ्नो पक्षबाट पुर्‍याउने आश्वासन भने दिएका छन्। अहिले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले कांग्रेस र माओवादीका मात्र प्रतिनिधि सभामा १०९ सदस्य छन्। जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि १८ जना सांसदको हस्ताक्षर नै गरिसकेकाले त्योसमेत जोड्दा १२७ हुन्छ।
बुधबार बिहान यादव निवास हात्तीवनमा प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा आफ्नोतर्फबाट २५ सांसद पुर्‍याउने यादवले बताएको स्रोतले दाबी गरेको छ। ‘मैले आफ्नो तर्फबाट २५ जना सांसद पुर्‍याइदिन्छु, संयुक्त सरकार बनाउन लाग्नुस्’, भेटमा यादवले भने, ‘सबैभन्दा पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने देउवाजीलाई प्रेसर दिनुस्। सरकार बनाउन कुनै समस्या हुँदैन। आवश्यक सांसद जसपाबाट मिलाउन सकिन्छ।’ संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिन देउवाले नै अग्रसरता नदेखाएको विषयमा यादवले आक्रोश पोखेका एक नेताले बताए।
ओलीलाई तत्काल १३ सांसदको चिन्ता
एमालेमा १२१ सांसद छन्। त्यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्। यसो हुँदा ओलीलाई थप १३ मत आवश्यक हुन्छ। त्यो मत ओलीले जसपाबाट पुर्ति हुने अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले ओली जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेताहरूलाई आफ्नो कित्तामा तान्ने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेश आन्दोलनमा मुद्दा लागेका १ सय १० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओलीले वातावरण बनाएका छन्। जसपाका अन्य मुद्दा सरकार जोगिए पुरा गर्ने भन्दै महन्थ–राजेन्द्रलाई फकाइरहेका छन्। ओलीले जसपाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै कार्यदल नै बनाएका छन्। महन्थ९राजेन्द्र पक्षले पनि कार्यदल बनाएको छ। त्यसपछि नै जसपाको विवाद झन् बढेको थियो। बाबुराम९उपेन्द्र पक्षले ओलीको विकल्प खोज्नपुर्ने अडान राख्दै आएका थिए। उनीहरूले जसपाको कार्यदललाई नचिन्ने समेत बताएका थिए।
जसपाका ३४ जना सांसद ९२ जना निलिम्बित० मध्ये १८ जना बाबुराम–उपेन्द्र पक्षमा खुलिसकेका छन्। अरु जसपाका १४ सांसदको साथ पाएमा ओली सरकार जोगिने अवस्था हुन्छ।
तर, ओलीलाई एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले मत नदिने घोषणा गरेकाले थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ। एमालेका १२१ जनामध्ये ३५ जना नेपाल पक्षका छन्। जसमध्ये ३० जनालाई ओलीले स्पष्टीकरण सोधेर चिढ्याइसकेका छन्। नेपाल पक्षका सांसदहरुले पार्टीलाई २ जेठ २०७५ मा नफर्काए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिइसकेका छन्। अर्को विकल्पका रुपमा ओलीलाई जसपाका जति सांसदले मत दिए सरकार जोगिन्छ नेपाल पक्षका त्यति नै सांसदले त्यसअघि नै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
‘ओली सरकार कुनै हालतमा रहनु हुँदैन। यदि रह्यो भने पार्टी र देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ’, नेपाल पक्षका एक सांसदले भने, ‘त्यसो हुँदा जसपाका जति जना सांसदले सहयोग गर्छन् त्यति नै सांसदहरू हामी आत्मदाह गर्न तयारी अवस्थामा छौं।’
जेठ २ मा फर्किने कि नफर्किने ? कुन स्थायी कमिटीलाई मान्ने ? सहमतिका आधारहरु खोजी हुंदै
संसद पुर्नःस्थापना नहुने पक्का, यस्तो आयो आदेश हेर्नुहोस्
May 28, 2021 May 29, 2021 N20
लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का ,